ပုံနှိပ်ထည် 95% ထဲမှာပါတဲ့ 5% spandex
နံရိုးထည် 95% Cotton5% Spandex သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်အတွက်စိတ်ဝင်စားလျှင်ပဲအသေးစိတ်ကိုရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ထောက်ပံ့ရေး Printed အထည်အလိပ်
ပုံနှိပ်ထည် 95% ထဲမှာပါတဲ့ 5% spandex 32s / 1 + 20D ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီပုံစံတစ်ခုချင်းစီကိုအရောင် print ထုတ်နိုင်ဘူး။ သင်တို့သည်ငါတို့၏ထုတ်ကုန်စိတ်ဝင်စားလျှင်ပဲအသေးစိတ်ကိုရဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်အခမဲ့ခံစားရပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်!
ဝါဂွမ်း + SP JERSEY ရောင်းချ
ဝါဂွမ်း + SP JERSEY, ဝါဂွမ်း + SP JERSEY
100% Rayon ဂျာစီရောင်း